Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo Dacwad lagu soo oogayo, Sababta,? – Hornafrik Media Network
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo Dacwad lagu soo oogayo, Sababta,?
illaa iyo 30 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Somalia ayaa lagu soo oogayaa Dacwad la xiriirta inay ka hor yimaadeen Xeer Hoosaadka Baarlamanka Somalia.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamad Cismaan Jawaari ayaa u gudbiyay Magacyadda Xildhibaanadaasi Guddiga Anshaxa iyo Abaalmarinta ee Baarlamaanka si ay go’aan uga soo gaaraan Dambiyadda lagu soo oogay oo ay ka mid tahay inay si cad u diideen inay saxiixaan ka qaybgalka Fadhiga Baarlamaanka, iyagoo jooga Hoolka Baarlamaanka, inay fowdo ka dhex abuureen Hoolka Golaha Shacabka, inay handadeen Xildhibaano kale. Waxaana Xildhibaanadan oo ah kuwa taageersan Raiisul Wasare Xasan Cali Khayre ay Guddigu ka fariisanayaan Dacwadda loo haysto Maalmaha nagu soo aadan, sida ay xog ku heshay HornAfrik.
Fadhiga Baarlamaanka ee loo madlanaa Maanta ayaa 30 Xildhibaan oo qaarkood ay Wasiiro yihiin waxay diideen iyagoo jooga Xarunta Baarlamaanka inay saxiixaan Buugga Ka qaybgalka, taasoo keentay inuu buuxsami waayo Kooramkii uu ku furmi lahaa Fadhiga Baarlamaamka. Waxaana saxiixay inay ka soo qayb galeen Fadhiga 105 Xildhibaan, iyadoo ay ka dhigan tahay in haddii 30 kaas Xildhibaan ay iyaguna saxiixi lahaayeen Buugga ka qaybgalka uu furmi lahaa Shirka Baarlamaanka.
Waa Markii 2-aad ee Xukuumadda Khayre ay is hortaagto inuu qabsoomi Fadhi Baarlamaanku uu dood kaga yeelan lahaa arrimo la xiriira Xukuumadda Somalia, Waxaana horay ay sidan oo kale ka baajiyeen Xildhibaano u badan Wasiiro inay saxiixaan Buugga ka qayb galka Fadhiga Baarlamaanka mar dib u eegis lagu samayn lahaa Xilka Wasiirka Dastuurka, Cabdi Xoosh oo loo haystay inuu ku gafay Baarlamaanka.
Madaxwaynaha iyo Raiisulwasaaraha oo gooni gooni ula kulmay Xildhibaanadda Beesha Absame, Maxaa ka soo baxay,?